Skuuta na -efe efe site na ihe nkiri Back to the Future na ọganihu ya | Nye m oge ntụrụndụ
Zute skuuta na -efe efe site na Back to the Future
Gabriela moran | | Cine, Ihe nkiri sayensị
N'ezie ị hụla ma ọ bụ, opekata mpe, nụ nke ahụ trilogy ihe nkiri na -aga nke ọma laghachi na ọdịnihu. E wepụtara ihe nkiri mbụ na 1985 wee bụrụ nke kacha aga nke ọma n'afọ. Ihe ịga nke ọma ya dị ukwuu nke na ekpebiri ịhapụ usoro nke afọ anọ ka nke ahụ gasịrị na Steven Spielberg dị ka onye na -emepụta ihe! Ọ bụ en ihe nkiri nke abụọ ebe skuuta na -efe efe si na fim Back to the Future 2 pụtara.
Ihe nkiri atọ ahụ bụ starring Michael J Fox dị ka Marty McFly na Christopher Loyd dị ka ọkà mmụta sayensị eccentric Emmet Brown. Ihe nkiri ọ bụla tinyere ndị isi na oge dị iche iche ekele ndị njem oge na DeLorian. Obi abụọ adịghị ya, trilogy nọchiri anya nnukwu ọganihu na ụdị akụkọ sayensị. Mana nke kachasị, nkeji nke abụọ wepụtara nnukwu atụmanya gbasara ọdịnihu na mmepe teknụzụ nke a ga -enwe, dị ka nke skuuta na fim ahụ. Gụọ n'ihu ka ị hụ nkọwa niile gbasara ngwa ọhụrụ a yana ihe ọhụrụ gbasara ya!
1 Skuuta na -efe efe site na ihe nkiri Back to the Future 2
2 Laa azụ ugbu a… A na -eme ncheta afọ 30 nke usoro a!
3 Skuuta na -efe efe site na ihe nkiri Back to the Future abụrụla eziokwu?
4 Kedu ihe ị ga -atụ anya ugbu a?
5 Ndị skuuta ugbu a
Skuuta na -efe efe site na ihe nkiri Back to the Future 2
Onye bu uzo bu Marty: onye dị afọ iri na asaa nke na-eji skuuta ya esi n'otu ebe gaa ebe ọzọ nakwa na ọ bụkwa akụkụ nke otu egwu ụlọ akwụkwọ ebe ọ na -akpọ ụbọ. O nwere enyi nwanyị aha ya bụ Jennifer na ezigbo enyi ya bụ Emmet, ọkà mmụta sayensị nke na -eburu ya njem oge ma bụrụ nke a na -akpọkarị "Doc."
Ihe nkiri a bidoro na 1985 na ndị na -eme mkpọtụ na -aga njem afọ 30 n'ọdịnihu. Ha kwesịrị imecha ozi n'Ọktoba 21, 2015!
Laghachi na Ọdịnihu 2 bụ otu n'ime ihe nkiri kachasị eme nke ọma na ụdị akụkọ sayensị. Mmetụta pụrụ iche dị egwu maka oge ha! Eziokwu dị anya dị ka onyonyo XNUMXD, ụgbọ ala na -efe efe na skuuta Marty ji mee ihe.
El skuuta na -efe efe site na ihe nkiri Back to the Future ghọrọ akara ngosi maka ndị na -akwado trilogy. Nzute Marty nwere ụdị akwụkwọ njem dị otú a bụ ihe mberede, n'ihi na ọ bụ ụzọ o si merie n'ọgụ n'akụkụ ụfọdụ nke nkata ahụ.
Ewezuga akụkọ anyị nwere ike ikwu, na -atụghị ụjọ na anyị ezighi ezi, na ihe kacha dị mkpa na ihe nkiri a bụ ọhụụ nke ndị okike kere ọdịnihu. Ihe nkiri a na -egosipụta azịza enwere ike ịza ajụjụ ebighi ebi: kedu ihe ọdịnihu ga -adị ka oge na -aga?
Laa azụ ugbu a… A na -eme ncheta afọ 30 nke usoro a!
Ọdịnihu jidere anyị na afọ 2015 rutere! Fans nọ na -atụ anya Ọktoba 21. Nke a, n'ihi na n'ime ihe nkiri nke abụọ, nke ahụ bụ ụbọchị egosiri mgbe ọbịbịa Marty na Doc ga -abịa n'oge anyị.
Iji mee ncheta afọ iri atọ, ụfọdụ mba wepụtara ihe nkiri atọ ọzọ n'ụlọ ihe nkiri. A ozi sitere n'aka Dọkịta Emmet Brown ịgwa ndị hụrụ saga n'anya ma gosi n'okpuru:
Atụmanya ahụ buru oke ibu dịka ọtụtụ ihe ịtụnanya nwere ike ime. Ọ bụ ohere ụlọ ọrụ nwere ike irite uru nke ọma! Nke a bụ ihe mere Nike, Pepsi na Lexus mere. Ụlọ ọrụ ụgbọ ala ikpeazụ a gosipụtara ụdị izizi nke enwere ike iji tụnyere skuuta a ma ama na -efe efe si na fim Back to the Future 2.
Skuuta na -efe efe site na ihe nkiri Back to the Future abụrụla eziokwu?
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ewepụtala ihe ngosi iji nweta ihe nlereanya nke na -arụ ọrụ dị ka skuuta na fim ahụ mere. Lexus, ika ụgbọ ala ama ama bụ otu n'ime ha
Slide bụ aha Lexus maka skuuta na -efe efe, ọ na -efegharị na ikuku wee nwee ike fefere n'elu! Ngwaọrụ na -eji teknụzụ dị ugbu a: ndọta magnetik. Ọ bụ ya mere, ọ dị nwute na ọ naghị arụ ọrụ na elu ọ bụla, ya bụ, ọ nwere ike ịmị naanị na egwu nwere ndọta pụrụ iche.
Skuuta na -arụ ọrụ na -eji mmiri mmiri nitrogen dị ka mmanụ ọkụ, maka ntụnyere. Yabụ ozugbo skuuta kporo ọkụ, ọ na -efunahụ levitation ma chọọ ka emejupụta ya na nitrogen. Nkezi ojiji maka skuuta a na -efe efe bụ ihe dị ka nkeji 20. Lexus wuru na Cubelles, obodo dị nso na Barcelona, ​​egwu pụrụ iche ka enwere ike nwalee ya.
Skuuta a na -efe efe Ọ bụghị maka ire ere, maka oge ọ bụ naanị ihe ngosi. N'ikpeazụ, ika ahụ ji ohere mmepe teknụzụ nke Slide ya na ncheta azụ nke ọdịnihu were were mee ya dịka mgbasa ozi maka ụgbọ ala ya.
Kedu ihe ị ga -atụ anya ugbu a?
Companieslọ ọrụ ndị ahụ na-aga n'ihu nyocha ma tinye ego n'inweta teknụzụ dị mkpa iji weta skuuta na-efe efe na-atụ anya ogologo oge site na ihe nkiri Back to the Future.
Hendo bụ ụlọ ọrụ nke malitere skuuta na -efe efe nke nwere ike ịzụ ahịa ruo ọtụtụ afọ. Agbanyeghị na Hendo Hoverboard anaghị eji nitrogen mmiri mmiri, ọ ka nwere oke ojiji maka mmalite ya.
Hendo ejirila mkpokọta mkpokọta ewepụtara nnukwu ego. Kedu ihe ọzọ etinyela ụfọdụ ihe ngosi ruru puku dollar iri maka otu onye skuta!
Ekele maka ọrụ nyocha na mmepe, Hendo ewepụtala ọtụtụ ụdị ngosi nke o mezuru. Ana m egosi ha na foto a:
Ndị skuuta ugbu a
E wepụtara trilogy ahụ na 80s, oge onye skuuta kacha ewu ewu dị ka ụzọ njem na ntụrụndụ. Ọ dịghị onye nwere ike iche n'echiche ị nweta nke feere! N'ezie nkeji nke abụọ nke trilogy ahụ welitere atụmanya n'uche ndị na -ekiri ya. Ụfọdụ n'ime ha bụzi akụkụ nke ndụ anyị kwa ụbọchị ebe ndị ọzọ adịchaghị adị.
Ihe mejupụtara eziokwu bụ nke ahụ Ebumnuche nke ọtụtụ ụlọ ọrụ bụ ịmalite skuuta na -efe efe nwere otu ọrụ ahụ Marty McFly ji.
Anyị nwere ngwa ugbu a maka ọrịre na nke na -ewu ewu nke ukwuu: m na -ekwu maka Igwe eletrik nakwa na ihe sitere na fim ahụ kpaliri ha.
Ọ bụ eziokwu na anyị na -abịarukwu nso! Ọ dị ka ihe ijuanya nwere ike ịbịa ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Zute skuuta na -efe efe site na Back to the Future